Paul Scholes” Jose Mourinho waa 54 Jir Maskax ahaan laakiin 14 Sano jir | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Paul Scholes” Jose Mourinho waa 54 Jir Maskax ahaan laakiin 14 Sano jir
(08-11-2018) Cayaaryahankii hore ee kooxda kubada cagta Manchester United Paul Scholes ayaa Weerar aan ganbasho lahayn ku qaaday Macalin Jose Mourinho kadib Rabshadii uu ka kiciyey Garoonka kooxda Juventus.
Paul Scholes” Hadda waa 54 Sano jir laakiin maskax ahaan waxa uu la mid yahay wiil 14 Jir ah waayo dhaqanka xun ee uu muujiyey waxaa samayn kara oo kaliya qof aan qaan gaar ahayn waana wax laga xishoodo waxa uu sameeyey.
Ninkaan oo falanqeeye ka ah TV ga BT Sport.ayaa shaaca ka qaaday in dhaqanka Jose Mourinho uu muujinayo qayro mas uulnimo weyn waana in lagu xiqaabaa ayuu hadlkiisa sii Raaciyey Paul Scholes oo u muuqdey mid ka caraysan in Macalinka Manchester United laficiltamo Taageerayaal uu ka badiyey hadana uu joogo Garoonkooda.
Jose Mourinho ayaa dhegta qabsaday isla Markaana madaxa rux ruxay kadib markii uu 2-1 ku Garaacday kooxdii uu martida u ahaa ee Juventus kulan katirsan koobka Champions League balse waxa uu Sameeyey Mourinho caro ayaa ka dhalatay taas oo keentay in Ciidanka amaanka garoonku xoog kaga saaraan kana bad baadiyaan Cayaartoyda Juventus oo ku soo xoomey.
Mourinho aya ku doodey in uu ka fal celinayey Caay iyo aflagaado ku bilaabatay Markii cayaartu bilaabatay taas oo xitaa qoyskiisa wax looga sheegay sida uu hadalka u dhigay Caaydaas oo uu yiri waxa ay iiga imaaneysey Taageerayaasha Juventus.